निजामती प्रशासन जनप्रिय नहुनुमा राजनीतिक नेतृत्व दोषी छ : उमेश मैनाली « प्रशासन
जनताको जीवन उकास्न भन्दै पटक पटक राजनीतिक परिवर्तनहरू भएका छन् । व्यवस्थाहरू फेरिएका छन् तर पनि जनताको जीवनमा कुनै फेरबदल आएको छैन । कहाँसम्म भने राज्यबाट पाउने सेवा सुविधामा पनि उनीहरूले परिवर्तनको आभास पाएनन् । व्यवस्थाहरू त फेरिए तर लामो समयदेखि नेपालको निजामती सेवामा देखिँदै आएका समस्या उस्तै छन् । निजामती प्रशासन जनप्रिय हुन सकेको छैन । कर्मचारीतन्त्र जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार घट्नुको साटो दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । सरकारले ल्याएको सुशासनको नाराले व्यवहारमा सार्थकता पाउन सकेको छैन । यी र यस्ता अनेक आरोपहरुकाबीच नेपालको निजामती प्रशासनले कोरोना महामारीका बिच पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनाली सँग प्रशासन डटकमका विशेष प्रतिनिधि एस राज उपाध्यायले कुराकानी गरेका छन् ।
निजामती सेवालाई तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ ?
नेपालको मात्रै होइन, विश्वकै निजामती सेवा तीन वटा कालखण्डबाट गुज्रिएको छ । त्यो बेग्लै कुरा हो कि नेपालमा ती कालखण्डहरूको सुरुवात निकै पछि भयो । पहिलो कालखण्ड १९७० सम्मलाई मान्छौँ । १९ औँ शताब्दीको सुरुदेखि १९७० सम्म – जसलाई हामीले ‘पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन रिज्यूम’ भन्छौँ । त्यो भनेको प्रोफेसनलहरू अथवा ब्रिटिस सेवा क्यारियर सर्भिसमा भएका कर्मचारीहरूको राज्यको नीति कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा व्यावसायिकताको विचारधारा त्यसले बोक्यो । ब्युरोक्रेसीलाई कसरी बलियो गराउने ? कसरी उनीहरूको मनोबल उच्च गराउने ? भन्नेतिर यो केन्द्रित भयो । प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धपछि जुन किसिमको कल्याणकारी राज्यको अवधारणा आयो त्यसमा यहीँ कर्मचारीतन्त्र हाबी भयो । र, यसैको नायकत्व रह्यो ।
अहिले हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा बाहिर अध्ययन गरेर, तालिम लिएर आएका कर्मचारीहरू भएकाले पोसिली डकुमेन्टहरूमा त्यहाँका शब्दहरूको चयन र त्यहाँ अवलम्बन गरिएका नीतिहरू राख्न खोजेको देखिन्छ । तर त्यसले हाम्रो वास्तविकताको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।
Tags : उमेश प्रसाद मैनाली कर्मचारी निजामती प्रशासन लोक सेवा आयोग सुशासन